Par Taratra sur 13/07/2020
Volana marsa 2020, nandray karama farany ny mpiasan’ny Cnapmad. Maro ireo mpiasa miaina anaty fahasahiranana, tsy salama ary efa nisy ny maty. Eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena ireo mpiasa ireo, manao taratasy ilaina amin’ny fanadinam-panjakana. Mbola tsisy valiny ny fangatahan’izy ireo, hatramin’izao. Very hevitra tanteraka ireo mpiasa ireo ampian’ity valanaretina ity, misy efa voaroaka amin’ny trano nipetrahany. Mitaky karama izy ireo, hatramin’ny volan-jaza mbola tsisy resaka hatramin’izao.
Mbola betsaka ny mampiasa plastika ka miparitaka eny rehetra eny mandoto, manentsina ireo fantsona. Maharitra an-taonany maro anefa ireny plastika ireny, koa manentana ny minisiteran’ny Tontolo iainana ho amin’ny fampanarahan-dalàna, hampihena sy hanafoana mihitsy ny fampiasana plastika. Misy akora voajanahary maro eto an-toerana efa fampiasa tany aloha. Manomboka midina ifotony izao ny minisiteran’ny Tontolo iainana mijery ny any amin’ny orinasa.
Nivory niaraka nanao tombanezaka ny asa vita tao anatin’ny enim-bolana ny faritra Vatovavy Fitovinany. Nitarika ny fivoriana ny governoran’ny faritra, ny Jeneraly Razafitolotra Lucien, niantsoana ireo talen’ny sampandraharahan’ny faritra rehetra sy avy amin’ny tsy miankina. Ilaina ny fampahafantarana izany hisian’ny mangarahara, hamaritana ny ezaka vaovao ho an’ny enim-bolana ho avy. Tompon’andraikitra ny rehetra ho an’ny fampandrosoana ka samy nampahalala ny zava-bitany tao anatin’izay fotoana izay.
Niantso ny tompon’andraikitra rehetra any amin’ny distrikan’i Soalala, faritra Boeny, ny Bian­co, nampahafantatra ny fomba fiasa vaovao mahakasika ny ady amin’ny kolikoly. Fanabeaza­na sy fa­nen­tanana ny olona, fisorohana ny kolikoly sy ny fomba fanadihadiana ireo tranga mampiahiahy, endrika misy kolikoly. “Ampahafantarina mazava ny fomba nampiasana ny volam-bahoaka”, hoy ny ao amin’ny Bianco. Nifanakalo hevitra koa izy ireo momba ny lalàna mamaritra ny ady amin’ny kolikoly.